admin2, Author at NaulooDhun
कस्तो अवस्थामा महिलालाई यौ;’न प्रस्ताव राख्ने ? यो बेलामा नाँई भन्दैनन्
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on कस्तो अवस्थामा महिलालाई यौ;’न प्रस्ताव राख्ने ? यो बेलामा नाँई भन्दैनन्
काठमाडौं नेपाली समाजका यौ’नका वि’षयमा खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन। मनमा यौनका विषयमा विभिन्न जिज्ञासाहरु भए पनि अरुले के भन्छन् भन्ने ड’रले मानिसहरु आफ्नो जिज्ञासाहरुलाई मनमै दबाउँछन्। तर विज्ञहरु यस्त विषयमा पनि खुलेर बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्। महिलाहरूलाई महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखी सात दिन भित्र यौ’न इ’च्छा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। यो अवधिमा महिला यौ’न […]
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on भर्खरै आयो यस्तो खबर, मन्त्रालयले लक’डाउन हुने बारे यस्तो भन्यो
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन विश्वका २४ भन्दा बढी देशहरूसहित छि’मेकी मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपालमा यसबारे चासो बढेको छ । ओमिक्रोनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘लक’डाउन’ हुन सक्ने समेतका अफवाहहरू फैलाइएको देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोनको कुनै पनि ‘केस’ नभेटिएको राष्ट्रिय जनस्वा’स्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । यद्यपि, ओमिक्रोन भित्रिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक […]
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on गीताको अनमोल बचन, जसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ
भनिन्छ, श्रीमद्भागवद्गीताको अध्ययनले जीवन र जगतलाई बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिदिन्छ । गीताको रचना अद्भूत तरिकाले भएको कथन छ । त्यस अनुरुप कुरुक्षेत्र युद्धमा श्री कृष्णले गीताको सन्देश अर्जुनलाई सुनाएका थिए । श्रीकृष्णले युद्ध मैदानमा अर्जुनलाई जे जति कुरा सुनाए, त्यहि गीता हो । अतः यहाँ भागवत गीताका केही अनमोल उद्दरणहरु प्रस्तुत गर्दैछौं, जुन श्रीकृष्णले अर्जुनलाई […]
December 6, 2021 December 6, 2021 admin2LeaveaComment on कसरी प्रयोग गर्ने त स्त्रीले कण्डम (तरिकासहित)
काठमाडौं । सामान्यतया स्त्री कण्डमलाई सुखभोग गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।किनकी महिलाले लगाउने कण्डमबाट तल्काल सुखभोग गर्न मिल्दैन । कण्डममा भएका दुई वटा रिङ्गहरुमध्ये खुम्चिने पट्टिको रिङ्गलाई योनी भित्र घुसाउनु पर्दछ । अर्को कुरा मिति र प्याकेटमा हावा भए नभएको राम्ररी हेर्नु पर्दछ । म्याद गुज्रिएको भए प्रयोग गर्नु हुँदैन । […]
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन
आमा छोरीको सम्बन्ध धेरै अटुट र विश्वासको हुन्छ । छोरीले आमालाई साथी सम्झेर आफ्नो मनको सबै कुरा आफ्नो अगाडि राख्छन्। तर, लन्डनमा आमा छोरीको स’म्बन्ध ठीक उल्टो छ। महिलाले आफ्नी आमासँगको स’म्बन्धको सत्यता बताउँदै स’म्बन्ध पो’र्टलमा विज्ञको राय मागेकी छिन् । महिलाले लेखेकी छिन्, ‘मैले मेरी आमाको गो’प्य कुरा वर्षौंदेखि मानिसहरूबाट लुकाएर राखेको छु । […]
घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन ।
December 6, 2021 December 6, 2021 admin2LeaveaComment on घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन ।
“घरमा कोही नभएको मौका पारी यि/युवतीले यस्तो तरिका”
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on “घरमा कोही नभएको मौका पारी यि/युवतीले यस्तो तरिका”
महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत गर्छन । तर आफ्नो स्त”नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन ।स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको […]
नितम्ब ठूलो भएका महिलाहरु आकर्षक मात्र हुँदैनन्, स्वस्थ पनि हुन्छन्
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on नितम्ब ठूलो भएका महिलाहरु आकर्षक मात्र हुँदैनन्, स्वस्थ पनि हुन्छन्
नितम्ब ठूलो भएका महिला आकर्षक मात्र हुँदैनन्, स्वस्थ पनि हुन्छन्: एक नयाँ अध्ययनबाट यो पत्ता लागेको छ कि, वजन ठिक्क भएका तर नितम्ब, जाँघ तथा खुट्टामा बढी बोसो भएका मानिसहरुमा हृदयाघात, मधुमेह तथा स्ट्रोक जस्ता समस्याको खतरा कम हुन्छ । महिलाहरुमा नितम्ब ठूलो हुनुलाई कामुकतासँग जोडिन्छ । तर नितम्बको सम्बन्ध केवल कामुकतासँग मात्र छैन । […]
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on दिदी भिनाजुको बिचमा जाँदा सालीको भयो यस्तो अवस्था …
काठमाडौं / एक भिनाजुले सालीमाथि कु *टपि’ट गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका -५ गेटाका गौतम विकले सालीमाथि कु’ टपि’ट गरेका हुन्। ३० वर्षीय विकले २० वर्षीया साली मनसरा विकलाई कु’टेेर घा इते बनाएका र उनको धनगढीस्थित निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। दिदी भिनाजुबीच भइरहेको झ गडा मिलाउन खोज्दा […]
आफ्नो ब्रा भित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर एक युवतीले कोरलिन हाँसको अण्डा !
December 6, 2021 admin2LeaveaComment on आफ्नो ब्रा भित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर एक युवतीले कोरलिन हाँसको अण्डा !
मान्छेले आफ्नै शरीरको ताप दिएर चराचुरुंगीको अण्डा कोरलेको सुन्नुभएको छ? सायदै छैन होला तर यहाँ एउटा अनौठो र रमाइलो कुरा भएको छ।अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एकजना महिलाले आफ्नो ब्राभित्र हाँसको अण्डा राखेर कोरलेकी छिन्। बेट्सी रोस नामकी ती महिलाले पार्कमा अलपत्र अवस्थामा फेला पारेको हाँसको अण्डालाई आफ्नो ब्राभित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर त्यसबाट हाँसको बच्चा कोरलेकी हुन् । […]
कस्तो अवस्थामा महिलालाई यौ;’न प्रस्ताव राख्ने ? यो बेलामा नाँई भन्दैनन् December 6, 2021
भर्खरै आयो यस्तो खबर, मन्त्रालयले लक’डाउन हुने बारे यस्तो भन्यो December 6, 2021
गीताको अनमोल बचन, जसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ December 6, 2021
कसरी प्रयोग गर्ने त स्त्रीले कण्डम (तरिकासहित) December 6, 2021
घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन December 6, 2021